အပေါ်ပိုင်း Homogeneous motor ဖြင့် တရုတ် ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်စက် | အလှကုန် Emulsifier ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
အပေါ်ပိုင်း Homogeneous motor|Cosmetic Emulsifier ဖြင့် လေဟာနယ် ရောစပ်စက်
၁။Siemens တို့ထိ PLC လည်ပတ်မှုစနစ်
6.leader time 30 ရက်
8. 100 လီတာမှ 5000 လီတာအထိ ပမာဏ
1.Lifting emulsifier pot ၊ operation platform ၊ oil and water pot ၊ oil and water pot နှင့် controller အပါအဝင်၊emulsifying pot ကိရိယာ၊ emulsifying pot rack နှင့် emulsifying pot cover fixed plate၊ emulsifying pot တွင် ရောစပ်ထားသော ယန္တရား၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း ယန္တရား၊ ဖုန်စုပ်စက် နှင့် emulsifying pot cover lifting ယန္တရား၊ ရောစပ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အအေးခံစက်၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ emulsifying pot အဖုံးသည် lifting ယန္တရား၏ ထိန်းချုပ်ထားသော အဆုံးကို controller ၏ output သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။
2.အလှကုန် Emulsifierအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း 200L မှ 2000L အထိ;
3. မြင့်မားသော viscosity 10,000 ~ 180,000cps viscosity;
4.အလှကုန် Emulsifierမွှေခြင်းနှင့် လှော်တက်မွှေခြင်းတို့ကို သီးခြားစီ သို့မဟုတ် တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ပစ္စည်း granulation၊ emulsification၊ ယူနီဖောင်းရောစပ်မှု၊ ကွဲလွဲမှုစသည်ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်သည်။
5.အလှကုန် Emulsifierအရှိန်မြင့်မွှေပြီးပါက ပစ္စည်းအား ပူဖောင်းများထွက်မလာစေရန် လေဟာနယ်အခြေအနေအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ထားပြီး သန့်ရှင်းရေးနှင့် မြုံခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
6. .ငါးပိ၏ ချောမွေ့မှုကို သေချာစေရန်အတွက် အရည်၊ စွမ်းအင်မြင့်မားစွာ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း နှင့် centrifugation ရရှိစေရန် အစွမ်းထက်မျှတသော အထူးမျဉ်းကွေး၏ ရဟတ်အား သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၏ stator နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
7. အိုးကိုယ်ထည်၏ သံမဏိအလွှာသုံးလွှာ၊ မှန်ပွတ်ပြီး GMP လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ၊
8. ပင်မ emulsifying ရေနွေးအိုးနှင့် ဆီနှင့် ရေရောစပ်ပေးသည့် နှစ်မျိုးလုံးတွင် တူညီသော လှုံ့ဆော်ပေးသည့် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အမျိုးအစားနှင့် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အမြန်နှုန်း၊
9.အလှကုန် Emulsifierhomogenizer သည် ကုန်ချောထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် လွှဲပြောင်းပန့်တစ်ခုအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။
၁၀။အလှကုန်စက်ပင်မ emulsifying ရေနွေးအိုးနှင့် ဆီနှင့် ရေရောစပ်ပေးသည့် နှစ်မျိုးလုံးရှိ homogenizer er နှင့် agitator များအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း၊
11.အပူနှင့်အအေးအတွက်နှစ်ထပ်အကျီများ;တုန်လှုပ်ခြင်းစနစ်တွင် ပြတင်းပေါက်နှင့် အလင်းရောင်ပါရှိသည်။
၁၂။အလှကုန်စက်မွှေနှောက်ခြင်းနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း မတူညီသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် တင်သွင်းလာသော ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၊
13.Complex scraping board ရောစပ်ထားသော oar သည် ရှုပ်ထွေးသော ဟင်းချက်နည်းတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
Mightiness balance isotactic curve rotor သည် အရည်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊
၁၄။အလှကုန်စက်ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ပစ္စည်းကို ပိုးမွှားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဖုန်စုပ်စက် (ရေ၊ ဆီ၊ အမှုန့်) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
15.Homogenizer ကို ဘွိုင်လာအောက်ခြေတွင် မော်တာပါဝါ ပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှင့် ခိုင်ခံ့အောင် တိုးမြှင့်ထားသည်။ထုတ်လုပ်မှုအနည်းငယ်အတွင်း၊ ၎င်းသည် တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝရရှိစေနိုင်သည်။
16. Tanks ၏ ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးမြင့် ပြည်တွင်း SUS304 နှင့် SUS 316 ကို လက်ခံပါသည်။
17. နောက်ထပ်ဖောက်သည်များအတွက် ရွေးချယ်စရာအတွက် ရေနွေးငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်အပူပေးရန်အတွက် ကွဲပြားသော ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းများ၊
18.Double temperature probes နှင့် controllers များသည် main vacuum homogenization Blender တွင် လျှပ်စစ်အပူပေးမည့် controllers များသည် ရောစပ်နေစဉ်အတွင်း လေပူဖောင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ပိုမိုတိကျသော Vacuum system ကိုအာမခံပါသည်။
19.Homogenizing vacuum emulsifier mixer သည် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း အချိန်ကိုက် homogenizer ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး rotate speed 4500 r/min;
20. ပြီးပြည့်စုံသော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား2မိုက်ခရိုမီတာနှင့် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေခြင်း၊
၂၁။အလှကုန်စက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် အအေးခံခြင်းနှင့် အပူပေးစနစ်ဖြင့် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံရန် နှစ်ထပ်အကျီများ။
မော်ဒယ် စွမ်းရည်(L) Emulsify မော်တာ ရောစပ်မော်တာ စုစုပေါင်းအာဏာ(ရေနွေးငွေ့/လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်း) အကန့်အသတ်ရှိသော လေဟာနယ် (Mpa) အရွယ်အစား (မီလီမီတာ)L*W*H
ပင်မအိုး ဆီအိုး ရေအိုး KW RPM KW RPM
၁၅၀ ၁၅၀ 75 ၁၂၀ ၇.၅ 0-3000 ၁.၁ ၀-၆၃
၁၃/၃၀ -0.09 2180*2500*26500*--2700
၂၀၀ ၂၀၀ ၁၆၀ 50 ၇.၅ ၁.၅ ၁၅/၄၀ 2380*2600*200-2900
၃၀၀ ၃၀၀ ၂၄၀ ၁၆၀ 11 ၂.၂ ၁၈/၄၉ 3000*3400*2500-3600
၅၀၀ ၅၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 114၂၄/၆၃ 3400*3500*2900-3900
၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 15 ၅.၅ ၃၀/၉၀ ၃၆၀၀*၄၂၀၀*၃၃၀၀-၄၆၀၀
၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၆၀၀ ၁၈.၅ ၇.၅ ၄၀/၁၂၀ 4200*4800*3800-5400
အလှကုန်၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ပလပ်စတစ်အစေး၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ကတ္တရာနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချမှုများစွာရှိသည်။
1၊ ကောင်းမွန်သောဓာတုပစ္စည်းများ- ပလတ်စတစ်များ၊ အဖြည့်ခံများ၊ ကော်များ၊ အစေးများ၊ ဆီလီကွန်ဆီ၊ အလုံပိတ်များ၊ slurry၊ surfactants၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ အမြှုပ်ထွက်အေးဂျင့်၊ တောက်ပစေသော၊ သားရေထည့်ပစ္စည်းများ၊ coagulants စသည်တို့။
2၊ ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း- အကြီးစားဆီ emulsification၊ ဒီဇယ်ဆီ emulsification၊ ချောဆီ စသည်တို့။
3၊ နေ့စဉ်ဓာတုလုပ်ငန်း- အဝတ်လျှော်မှုန့်၊ စုစည်းထားသော အ၀တ်လျှော်မှုန့်၊ အရည်ဆပ်ပြာ၊ အလှကုန် အမျိုးမျိုး၊ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်ကုန်များ စသည်တို့။
1. ပါဝါထောက်ပံ့မှု- သုံးအဆင့် : 220v 380v .415v။50HZ 60HZ
2. ပမာဏ : 150 လီတာ မှ 2000 လီတာ အထိ
3. မော်တော်အမှတ်တံဆိပ် : ABB ။Siemens ရွေးချယ်မှု
4. အပူပေးနည်းလမ်း- လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု
5. ထိန်းချုပ်မှုစနစ် plc ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။သော့အောက်ခြေ
6. Fixed type သို့မဟုတ် Hydraulic lifting type သို့မဟုတ် Pneumatic lifting ၏ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ
7. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ SIP ကို ​​ရရှိနိုင်ပါသည်။
8. Teflon ခြစ်စက်ဖြင့် နှစ်လမ်းညွန် ရောစပ်လှော်တက်
9. ထပ်တူထပ်မျှအချိန်ကြာကြာ ညီညီညာညာဖြစ်တည်မှုအတွက် စက်ပြင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် အအေးခံစနစ်၊
ယခင်- ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန်အတွက် Homogenizer|Homogenizer ရောနှောစက်
နောက်တစ်ခု: အကြိုရောသမမွှေစက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက်
ရောသမမွှေစက် ဖြင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက် | C...
နှစ်ထပ် homogenizer ဖုန်စုပ်စက် emulsifying mixer mac...
အလွန်မြန်သော မြန်နှုန်းမြင့် လေဟာနယ် ရောနှောခြင်း ၊